निक्की अध्यक्षमा केशवा भारतसँगको व्यापार बढाउन अर्थमन्त्रीको जोड | गृहपृष्ठ
Home बजार निक्की अध्यक्षमा केशवा भारतसँगको व्यापार बढाउन अर्थमन्त्रीको जोड
निक्की अध्यक्षमा केशवा भारतसँगको व्यापार बढाउन अर्थमन्त्रीको जोड
चैत १, काठमाडौं (अस)। नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)को मङ्गलवार भएको साधारणसभाले सञ्जीव केशबाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ । कार्यसमितिका सदस्यमा आनन्द बगारिया, क्याविनेट श्रेष्ठ, काम्रान बकर, राजेन्द्रमान शेरचन, शशिराज पाण्डे, सौर्य राणा, शेखर गोल्छा, शशिकान्त अग्रवाल र श्यामकुमार लोहिया निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
साधारणसभामा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न आयात घटाउने मात्र नभई समग्र व्यापार बढाउनुपर्ने बताए । उनले विदेशी लगानीलाई नेपालले सधैं स्वागत गरिरहेको उल्लेख गरे । पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपालका सबै जिल्लामा भारतीय सहयोगबाट करीब रू. ६० अर्बको लगानीमा ४ सयभन्दा बढी परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उक्त सहयोग नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्येको झण्डै ४५ प्रतिशत रहेको उनको दाबी छ । नेपालमा भारतीय लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि बेलाबेलामा सञ्चार माध्यमले फैलाउने गरेका समाचारका कारण भारतीयहरू थप लगानी गर्न सशङ्कित हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सन् १९९६ को व्यपारसन्धिमा भारतले नेपाललाई विभिन्न सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै राजदूत सूदले त्यसलाई नेपालले उपयोग गर्न नसक्नु नेपालकै कमजारी भएको दाबी गरे । सन् २००३ देखि ठूलो भारतीय लगानी नेपालमा भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी सुरक्षाको वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भारतले जति बढी सहुलियत दिए पनि व्यापारघाटा बढ्दै गएको बताए । चर्को ब्याजदर, तरलताको अभाव र १४ घण्टाको विद्युत् कटौती हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले यो अवस्था धेरै दिन राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले सन् १९९६ को व्यापारसन्धि कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले नेपाल भारत वाणिज्य सङ्घको योगदानबारे चर्चा गरे ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अरूणकुमार चौधरीले नेपाल भारतबीच व्यापार बढ्दै जाँदा चुनौती पनि थपिँदै गएको उल्लेख गरे । १६ वर्षअघि स्थापना भएको सङ्घले दुई देशबीच लगानी तथा व्यापारमैत्री सम्बन्ध स्थापनामा कार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ बढी सशक्त बनाउनुपर्ने चौधरको भनाइ थियो ।
मिस ई-कलेज २०११ का प्रतियोगी छनौट
चैत १, काठमाडौं (अस)। सिजन मिडिया प्रालिको आयोजनामा यही चैत २५ गते हुने ‘मिस ई-कलेज २०११’ का प्रतियोगीहरूको छनौट सम्पन्न भएको छ । ‘नारी व्यक्तित्व विकासका लागि शिक्षा र सौन्दर्य’ नारा दिइएको यस प्रतियोगितामा सहभागी छनौटका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । प्रतियोगिताका लागि ४२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २२ जना राजधानीका र राजधानी बाहिरको कोटाबाट ४ गरी २६ प्रतियोगी छनौट गरिएका छन् । छनौट भएका युवतीहरूलाई चैत १ गतेबाट भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लबमा पौडी, शारीरिक फिटनेश, फोटो सेसन व्यक्तित्व विकासलयागतका प्रशिक्षण दिइनेछ । त्यसैगरी माइती नेपाल नारकोनन् नेपाल वृद्धाश्रम भ्रमण र रक्तदानलगायत सामाजिक कार्यमा समेत सहभागी बनाइने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतियोगिताका विजेताले मिस ई-कलेजको ताजसहित रू. १ लाख ५० हजार मूल्यबराबरका महिन्द्रा फ्लाइट स्कुटर र साउथ वेष्टन कलेज बसुन्धरामा तीनवर्षको पूर्ण छात्रबृत्ति तथा अन्य गिफ्टहयाम्पर पाउनेछन् । फष्ट रनर अप र सेकेण्ड रनर अपले भने क्रमशः ल्यापटप र तीनवर्षको पूर्ण छात्रबृत्तिमा पढ्न पाउने तथा मोबाइल र अन्य गिफ्टहयाम्पर प्राप्त गर्नेछन् । यसबाहेक अन्य विभिन्न विधामा पनि विजेता छनौट गरिने
आयोजक सिजन मिडियाले जानकारी दिएको छ ।
‘ब्रोडब्याण्ड नीति आवश्यक’
ब्रोडब्याण्ड नीति बन्न नसक्दा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार सहज हुन नसकेको विज्ञहरूले औल्याएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन सङ्गठनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यशालामा विज्ञहरूले नेपालमा ब्रोडब्याण्ड सेवालाई प्रवर्द्धनको आवश्यकता देखाएका हुन् ।
मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि सरकार, निजीक्षेत्र र नियामक निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन सङ्गठनका विज्ञ कोलिन ओलिभर, वरिष्ठ सल्लाहकार समीर शर्मा, निर्देशक खनाल, एलेन बैलोचन तुलाधरले बोलेका थिए । प्राधिकरणले कार्यशालामा छलफलका क्रममा आएका निष्कर्षलाई ब्रोडब्याण्ड नीतिमा पनि समेट्ने बताएको छ । निर्देशक खनालले भने, ‘सुझावहरूलाई नीतिमा समेट्ने छौं ।’ प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड नीतिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
उपभोक्ता दिवस मनाइयो
चैत १, काठमाडौं (अस)। ‘ऊर्जा सबैका लागि’ भन्ने नारासहित अन्तरराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाइएको छ । यस अवसरमा ‘नेपाल उपभोक्ता मञ्च’ले मङ्गलवार भृकुटीमण्डपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा ऊर्जा सङ्कटले नेपाललाई गाजिरहेको अवस्थामा ऊर्जा सबैका लागि भन्ने नारा नेपाली उपभोक्ताका लागि दुःखद भएको नेपाल उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘१४ घण्टा लोडशेडिङको मार नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । महँगी प्रतिदिन बढ्दो छ । कार्टेलिङ र सिण्डिकेट प्रणालीले जनतालाई दुःख दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने । उत्पादककर्ताले वस्तुको मूल्य बढाउने र परिणाम घटाएर उपभोक्तालाई ठगिरहेका भए पनि सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउन नसकेको गुनासो कार्यक्रममा उपस्थित उपभोक्ताले गरेका थिए । उपभोक्ताहरूको हकका लागि भएको कानूनलाई संशोधन गरेर अझ व्यवस्थित गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गणेश ढकालले बताए । कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्चले २५ वर्षदेखि उपभोक्ता सचेतना तथा नीति निर्माणको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको अधिवक्ता ऋषि निरौलाले बताए ।
यसैबीच सोही दिवसका अवसरमा उपभोक्ता एकता मञ्चले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका उपभोक्ता जोखिममा पर्दै गएकाले नियामक निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने छलफलका सहभागीहरूले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले वित्तीय क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्न निययम निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । मञ्चले वित्तीय उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सचतेता अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मञ्चका उपाध्यक्ष कमल पौडेलले जानकारी दिए ।
दुग्ध विकासमा बीओके
बैङ्क अफ काठमाण्डू र नेपाल दुग्ध विकास संस्थानबीच एक सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैङ्कले संस्थानको सिफारिसमा दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछ । सो सम्झौतामा मङ्गलवार बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अजय श्रेष्ठ र संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । यस योजनाअन्तर्गत बैङ्कले गाईभैंसी खरीद, दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नका लागि ३ वर्षको ऋण प्रवाह गर्ने बताएको छ ।
नबिल बैङ्क बेँशीशहरमा
नबिल बैङ्कले लमजुङको बेँशीशहरमा शाखा खोलेको छ । उक्त शाखाको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर एवम् बैङ्कका अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले मङ्गलवार उद्घाटन गरे । बैङ्कका ४७ शाखा, २ ओटा प्रतिनिधि केन्द्र र ६३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । बैङ्कले हालै मात्र चाइना युनियन पे कार्ड सेवा शुरू गरेको थियो । यसअन्तर्गत बैङ्कका एटीएम तथा प्वाइण्ट अफ सेल्सबाट ग्राहकहरूले चाइना युनियन पे मार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
लक्ष्मी बैङ्कको ‘धनलक्ष्मी बचत’
लक्ष्मी बैङ्कले ‘धनलक्ष्मी बचत’ नामक बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘बचत गर्नु राम्रो हो’ अभियानका साथ शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरी यो बचत ल्याइएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । यसमा न्यूनतम रू. २५ हजारमा खाता खोल्न सकिन्छ । दैनिक मौज्दातमा ६ प्रतिशतका दरले हरेक ३ महीनामा ब्याज भुक्तानी गरिने बैङ्कले जानकारी दिएको छ । यस खाताका ग्राहकले निःशुल्क अन्तरशाखा कारोबार सुविधा र एटीएम कार्ड,ई-बैङ्किङ तथा विप्रेषणजस्ता सेवा सुविधाहरू सुलभ दरमा प्राप्त गर्न सक्ने बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
एनसेलको प्रवर्द्धन गण्डकीमा
एनसेलले मङ्गलवारबाट गण्डकी अञ्चलमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम शुरू गरेको छ । यस कार्यक्रमअर्न्तगत सिम तथा सिमसहितको मोबाइल सेट खरीद गर्दा बोनस ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिएको एनसेलले जानकारी दिएको छ । यसमा गण्डकी अञ्चलभर रहेका डिलर, सबडिलर तथा विशेष काउण्टरमार्फत रू. ९९मा एउटा सिम खरीद गर्दा १ सय ३२ रुपैयाँ ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै रू. ९ सय ९९ मा मोबाइल सेटसहित सिम खरीद गर्दा ९७ रुपैयाँ बोनसको व्यवस्था गरिएको एनसेलले जानकारी दिएको छ । यस्तै एनसेलका काउण्टरबाट खरीद गर्नेलाई विशेष उपहारको समेत व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
स्पाइसको एमआई-मोबाइल सेट
नेपालका लागि स्पाइस मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता टेलिटक प्रालिले एमआई-३१० मोबाइल सेट नेपाली बजारमा ल्याएको छ । एण्ड्रोइड २ दशमलव २ अपरेटिङ प्रणाली रहेको यस मोबाइलमा ब्राउजर बूकमार्क, हिष्ट्री, फोन नम्बर, वेबलगायत सुविधा होमस्त्रिmनबाट नै चलाउन सकिन्छ । यसमा इमेल, इन्ष्टयाण्ट म्यासेजिङ, म्युजिक, गेम, इण्टरनेटलगायत सुविधा छन् । यसलाई अनलक गर्दा अङ्क तथा अङ्क र अक्षर दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा ७ दशमलव २ मेगावाइट्स डाउनलोड स्पीड रहेको वाइफाइ चलाउन सकिन्छ । टच स्क्रीन सुविधा रहेको यस सेटमा २ मेगापिक्सेलको क्यामरा रहेको छ । यसमा १६ जीबीसम्मको मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको मूल्य रू. १५ हजार रहेको छ ।
ग्याजेट मोबाइलका नयाँ मोडल
ग्याजेट नेपाल प्रालिले के १ ह्वाक मोडलको नयाँ मोबाइल सेट नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो सेटमा दुईओटा सिमकार्ड एकै साथ स्टायण्डबाइ राख्न मिल्ने १ दशमलव ८ इञ्चको स्क्रीन रहेको छ । यस मोडलमा क्यामरा, एम पीथ्री, एफएम रेडियो, हयाण्डस् फ्री, टर्च लाइटजस्ता विशेषताहरू छन् । २ जीबीसम्मको मेमोरी कार्ड राख्न मिल्ने यो मोडलको मूल्य रू. २ हजार २ सय ९९ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
चार कम्पनीको निक्षेप बीमा
सानिमा र बिजनेश डेभलपमेण्ट बैङ्कले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताअनुसार बैङ्कमा रहेको सम्पूर्ण खातावालाको रू.२ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिने बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
यसैबिच रिलायबल तथा नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच निक्षेप बीमा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीमा प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको अधिकतम रू. २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा सुरक्षण निगमबाट हुनेछ ।
एनडीईपीको शेयर सूचीकृत
एनर्डर्ीइपी बैङ्कको ३ लाख ४१ हजार कित्ता शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको छ । योसहित एक्सचेञ्जमा बैङ्कको सूचीकृत शेयर सङ्ख्या ५४ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ पुगेको छ ।
यसैबीच बैङ्क र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच निक्षेप बीमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा यस बैङ्कका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतलाल वज्राचार्य र निगमका तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक जगदीशकुमार चालिसेले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बैङ्कमा प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको अधिकतम रू. २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा सुरक्षण निगमबाट हुनेछ ।
कालिका माइक्रो क्रेडिट हुवासमा
कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेण्ट बैङ्कले पर्वत जिल्लाको हुवास गाविसमा शाखा खोलेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त सो बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय गत वर्ष वालिङमा स्थापना भएको हो । सो बैङ्कको कुल पूँजी रू. ४ करोड, जारी र चुक्ता पूँजी दुवै रू. २/२ करोड रहेको छ ।
पर्वतको दुर्गम स्थानमा रहेको सो गाउँमा बैङ्क स्थापना भएपछि पर्वतको दक्षिणी क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी र स्याङ्जा जिल्लाका दुई गाविसका बासिन्दालाई बैङ्कबाट कारोबार गर्ने सुविधा पुगेको शाखा प्रबन्धक कुलदेव लामिछानेले बताए । शाखाले रेमिटयान्स, लघुवित्तलगायत अन्य बैङ्कले दिँदै आएका विभिन्न सेवाहरू पनि दिइरहेको छ । बैङ्कले निक्षेपमा न्यूनतम ७ देखि अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको छ । शाखाबाट दैनिक रू. १० लाखभन्दा बढीको रेमिटयान्सको कारोबार हुने गरेको छ ।
रियल इस्टेट मार्केटिङ एजेण्ट तालीम
बृहत् इन्भेष्टमेण्ट्स प्रालिले चौथो रियल इस्टेट मार्केटिङ एजेण्ट तालीम दिन शुरू गरेको छ । कम्पनीले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अनुशासित तथा मर्यादित व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सो तालीमको आयोजना गरेको बताएको छ ।
सो तालीम यही चैत ९ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको हो । यसअघि थाई रियल इस्टेट बिजनेश स्कूलसँगको सहकार्यमा कम्पनीले यस प्रकारको तालीम सम्पन्न गरिसकेको छ । तालीममा सम्बन्धित विषयका अनुभवी विशेषज्ञहरूबाट व्यावहारिक ज्ञान दिइनेछ । तालीमका सहभागी मध्येका ५ जना उत्कृष्ट सहभागीलाई कम्पनीले रोजगारीको अवसरसमेत प्रदान गर्ने बताएको छ । कम्पनीले तालीमप्राप्त एजेण्टको सहभागितामा हुने कारोबारमार्फत घरजग्गा खरीद गर्ने खरीदकर्ताहरूले सहज रूपमा ऋण कर्जा लिनका लागि प्राथमिकता दिने गरी नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैङ्कसँग केही समयअघि सहमति भएको थियो ।
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रसुवा-नुवाकोट शाखामार्फतत सङ्घले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सङ्घका अध्यक्ष शरणउत्सुक सापकोटाले कार्यालयका निमित्त प्रमुख मोहनबहादुर घटानीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष सापकोटाले लोडशेडिङका कारण जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएकाले लोडशेडिङ हटाउन माग गरे । उनले दुई ओटा जलविद्युत् गृह रहेको नुवाकोटमा लोडशेडिङ गर्न नहुने बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख घटानीले विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । केही समयअघिसम्म लोडशेडिङ मुक्त जिल्लाका रूपमा रहेको नुवाकोटमा अहिले दैनिक चार घण्टा लोडशेडिङ हुने गरेको छ । जिल्लामा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली र १४ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालित छन् ।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आफ्ना कार्यहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको बताएको छ । धितोपत्र कारोबारलाई सहज बनाउन अत्याधुनिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित यस कम्पनीले हाल कारोबार सञ्चालन गर्न विनियमावलीको मस्यौदा बनाई धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । यसै गरी अन्य आवश्यक नियम, विनियमहरू बनाउने कार्य गरिरहेको छ । कम्पनीले हालै थापाथलीस्थित शिखर बिज सेण्टरमा कार्यालयका लागि भवन लिई उक्त भवनमा आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिरहेको र सो कार्य चैत दोस्रो हप्ता सम्ममा पूरा भइसक्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ । कम्पनीले कारोबारका लागि आवश्यक हार्डवेयर जडानलगायत कार्य गरी निकट भविष्यमै सेवा दिने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।
लुम्बिनी निर्माण सङ्घमा नयाँ नेतृत्व
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घ, रूपन्देहीको ११ औं साधारणसभा तथा आठौं जिल्ला अधिवेशनले सुन्दर गुप्ताको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको गठबन्धनका गुप्ताले संयुक्त प्यानलका टोपबहादुर रायमाझीलाई ४२ मतले पराजित गरेका थिए । लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको गठबन्धनले नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको संयुक्त प्यानललाई पराजित गर्दै बहुमतसहित नेतृत्व लिएको हो । प्रथम उपाध्यक्षमा भने संयुक्त प्यानलका विष्णु अधिकारी विजयी भए । द्वितीय उपाध्यक्षमा दुई उम्मेदवारको मतबराबर भएपछि गोला प्रथाबाट संयुक्त प्यानलकी मञ्जु भुसाल निर्वाचित भइन् । यस्तै महासचिवमा बलराम शर्मा, सचिवमा विनय ज्ञवाली, कोषाध्यक्षमा दामोदर शर्मा र सहकोषाध्यक्षमा तारा नेपाल विजयी भए । चारैजना लोकतान्त्रिक समूहका हुन् । सदस्यहरूमा भने प्रयास खड्का, दीपक शाही, पुष्पराज गौतम, कृष्ण महत र सरवरे अहमद खाँ निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी सङ्घको बुटवल शाखाको ११ औं साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशनले शाखाको अध्यक्षमा दीर्घबहादुर केसी (कुमार) लाई निर्वाचित गरेको छ । उनले नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल समर्थित संयुक्त प्यानलका राजु लिगललाई पराजित गरेका थिए । यस्तै शाखाको उपाध्यक्षमा यदुनाथ पाण्डे, सचिवमा वसन्त श्रेष्ठ, सहसचिवमा विश्व पाठक र कोषाध्यक्षमा ज्ञानबहादुर पुन निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमितिका सदस्यहरूमा ज्ञानेन्द्रराज पन्त, नवीन पुन मगर, आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, गङ्गाबहादुर जिसी र ज्ञानु पन्त विजयी भएका छन् ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले नीतिगत समस्या धेरै रहेको र स्रोत साधनको कमी रहेको अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उनले यस पेशालाई बचाउन सबै व्यवसायी एक भई एकीकृत रूपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
७ आश्विन २०७५, आईतवार १६:१०
विज्ञापनमा क्लिनफिड लागू गर्नुपर्छः अध्यक्ष रिजाल
७ आश्विन २०७५, आईतवार १३:५४
युनिग्लोबद्वारा कम्युनिकेशन र फाइनान्स ल्याब सञ्चालन
७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०२
चितवनमा बैङ्किङ/बीमा एक्स्पो सम्पन्न
७ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:०१
निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा रवि सिंह निर्वाचित, सरकारी कार्यालय र ठूला निर्माण व्यवसायीको मिलेमतो तोडिने
भारतबाट अबैध रुपमा ल्याइएको ७१ लख ७९ हजार भारुसहित कैलालीबाट एक जना पक्राउ
बुढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा फेरि गेजुवालाई, लागत बढेर ३ खर्ब पुग्यो
जनताबाट लिएको कर जनताकै लागि : अर्थमन्त्री खतिवडा